Orinasa mpamokatra otrikaretina otrikaretina Sina 84 | Zhongxing
Ny famonoana otrikaretina dia manana ny asan'ny famonoana bakteria pathogenika tsinay sy ny coco supurative, ny viriosy tsy mampihetsika sns
Ity vokatra ity dia mety amin'ny famonoana otrikaina amin'ny endriny ankapobeny, akanjo fotsy, lahatsoratra maloto ao amin'ny hopitaly.
500 g 84 famonoana otrikaretina
500 g 84 mamono otrikaretina
84 Ireto karazana famonoana otrikaretina ireto:
1. raikipohy vaovao tsy misy fiarovana sy tontolo iainana phosforus;
2. tsy afaka manadio tena ihany, fa koa manadio sy mandoto.
84 Disinfectant (Type II) dia famonoana otrikaina misy klôro ampiasaina hanaparitahana ny tontolo iainana sy ny velaran'ny zavatra. Izy io dia misy akora fanadiovana mahery vaika izay mety hamono an'i E. coli. Mety ho
Famonoana otrikaretina 84 no ampiasaina indrindra amin'ny fandotoana sy famonoana otrikaina ny faritra amboniny, akanjo fotsy ary zavatra maloto ao amin'ny hopitaly ao an-trano, trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary toerana hafa. Ny fomba fampiasana lehibe indrindra dia:
1. Famonoana otrikaina ho an'ny sakafo:
Afangaro amin'ny rano ny vahaolana amin'ny tahiry amin'ny 1: 400 (vahaolana ampaham-bola 1 ampahany + rano 399 faritra), atsofohy ireo fitaovana hatao otrikaina ao anaty ranon-javatra voadidy mandritra ny 20 minitra dia kobanina amin'ny rano.
2. Famonoana olona amin'ny ankapobeny:
Afangaro amin'ny rano ny vahaolana tany am-boalohany, amin'ny tahan'ny 1: 100 (ampahany 1 amin'ny vahaolana tany am-boalohany + 99 faritra ny rano), hamafa, hofafafa ary hamafa ny tampon'ny zavatra hofongariny amin'ny vahaolana voapoizina 84 mamono otrikaretina mandritra ny 30 minitra.
3. Famonoana rongony fotsy:
Afangaro amin'ny rano ny vahaolana amin'ny tahiry 1: 100 (vahaolana ampaham-bola 1 ampahany + rano 399 faritra), atsofohy ilay lamba fotsy mba hamindraina ao anaty ranon-javatra notampohan-doha mandritra ny 30 minitra, ary avy eo sasao amin'ny rano.
4. Famonoana otrikaina ny loto ao amin'ny hopitaly
Ampiasao ny vahaolana tahiry mba afangaro amin'ny rano amin'ny tahan'ny 1:10 (vahaolana ampaham-bola 1 ampahany + rano 9 faritra) hamafana ireo loto ao amin'ny hopitaly izay mila fanadiovana ary apetraho ny vahaolana voaparitaka 84 vahaolana famonoana otrikaina hamafana, hamafazana, pel ary mamono otrikaina mandritra ny 60 minitra, avy eo kobanina amin'ny rano.
Anaran'ny vokatra 84 famonoana otrikaretina
fepetra arahana 500g
Fangaro fototra 4.0-6.0% (g / ml) hypochlorite sodium
Hihaona amin'ny isa mahazatra Q / 320803LEK002-2013
Isa fankatoavana (Su) Wei Xiaozheng Zi (2012) No. 3028-0062
asa Fandotoana, famonoana otrikaina, sns.
Teo aloha: Sarontava fanasivanana ny tenanao
Manaraka: Famonoana olona iodophor
Famonoana otrikaina 84
Fandraisana an-tokantrano 84 Famonoana otrikaina
Landihazo fitsaboana, Swab vita amin'ny landihazo voadio, Pad mpitsabo mpanampy, Saron-tava medikaly fanary azo ampiasaina, Saron-tava miaina, Saron-tava Antiviral,